Madasha xisbiyada Qaran oo ka hadlay guddiga uu magacaabay Guddoomiye Cabdi Xaashi | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Madasha xisbiyada Qaran oo ka hadlay guddiga uu magacaabay Guddoomiye Cabdi Xaashi
Madaxweynihii hore ee soomaaliya ahna Guddoomiyaha Madasha Xisbiyada Qaran Shariif Sheekh Axmed ayaa soo dhoweeyay Guddiga uu magacaabay Guddoomiyaha Aqalla sare, kaasi oo bilaabaya isu keenida Madaxda dowladda Federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada iyo qabsoomida shir wadatashi looga arrinsanayo doorashooyinka 2020-2021-ka.
Waxaan soo dhaweynayaa guddiga uu magacaabay guddoomiyaha Aqalka Sare Mudane Cabdi Xaashi ee ka howlgali doona isku-keenista madaxda labada heer Dowladeed iyo qabsoomidda shirka looga arrinsanayo hannaanka lagu geli doono doorashooyinka Qaranka 2020/2021, si loo helo hannaan raali ay isaga yihiin dhammaan saamileyda siyaasadda ee dalka.
Waa tallaabo mudan dhiiragalin iyo garab istaag, maadaama guddoonka Aqalka Sare ay muujiyeen biseyl iyo inay ka go’antahay xal ka gaarista mashaakilka muddada dheer u dhaxeeyey Madaxda labada heer ee dalka oo kala ah Dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah.
Waxaan ka rajeyneynaa in labada dhinac ay muujiyaan tanaasul iyo in laga fikiro mustaqbalka Soomaaliya oo wadahadal iyo isqancin oo kaliya guul lagu gaari karo.
Madasha xisbiyada Qaran oo ka hadlay guddiga uu magacaabay Guddoomiye Cabdi Xaashi was last modified: June 13th, 2020 by Admin
Trump oo cunaqabatayn ku soo rogay saraakiisha maxkamada caalamiga ah ee ICC
Dhageyso:-Taliyaha Ciidanka Qeybta 60aad oo amar bixiyey.